Barreessaa, Toleessaa, fi Fakkaasaa LibreOffice keessaa, Galmee kamiyyuu barreessuuf fayyadamaa tokko qofatu takkaatti banuu danda'a. Calc keessatti fayyadamtoonni hedduun wardii walfakkaatu yeroo walfakkaatutti barreessuuf banuu ni danda'u.
Gamtoomina Calc keessaa
Yommuu hordoffiin jijjiirraa yookiin hirmaannaan galmee kakaasamu ajajoonni muraasni hin jiran (fajajamaniiru).Wardii haaraaf miseensota fajajaman fayyadamuu yookiin saagu hin dandeessu.
Wardii haaraa uumuu
Fayyadamaa A'n galmee wardii haaraa uume. Haalonnii armaan gadii hojiirra ooluu ni danda'u:
Fayyadamichi wardiicha gamtoominaaf hirmaannaa gochuu hin barbaadu.
Galmee Barreessaa, Toleessaa,fi Fakkasaaf akka olitti ibsame fayyadamaa A'n galmicha banee, gulaalee achii ol kaa'e.
Fayyadamichi wardiicha gamtoominaaf hirmaannaa gochuu barbaada.
Galmee kanaaf amaloota gamtoominicha kakaasuuf fayyadamaan Meeshaalee - Galmee Hirmaannaa filata. Qaaqni bakki fayyadamaan hirmaachuu dandeessisuuf yookiin dhaamsuuf filachuu danda'u ni banama. Yoo fayadamaan hirmaachuu dandeessise, galmichi haalataa hirmaannaatiin ol ka'aama, kabalicha mata duree irrattis agarsiifama.
Ajajni Meeshaalee - Galmee Hirmaannaa galmee ammaaf haalaticha haalataa hirmaannaa hin godhamne irraa gara haalataa hirmaannaatti jijjiiruuf fayyaduu ni danda'a. Yoo galmee hirmaannaa haalataa hirmaannaa hin godhamneen fayyadamuu barbaadde, galmee hirmaannaa maqaa yookiin xurree biroo fayyadamuun ol kaa'i. Kuni garagalcha wardiichaa isa kan hin hiramne uuma.
Fayyadamaa A'n galmee wardii bane. Haalonni armaan gadii hojiirra ooluu ni danda'u:
Galmichi wardii haalataa hiramannaa keessa miti.
Galmee Barreessaa, Toleessaa,fi Fakkasaaf akka olitti ibsame fayyadamaa A'n galmicha banee, gulaalee achii ol kaa'uu ni danda'a.
Galmichi wardii haalataa hiramannaa keessa.
Fayyadamichi dhaamsa galmicha haalataa hirmaannaa keessaa fi amaloonni muraasni haalata kana keessaa akka hin jirre arga. Fayyadamichi dhaamsa kana gara fuulduraaf dhaamsuu ni danda'a. Erga TOLE cuqaastee booda, galmichi haalataa hirmaannaa tiin banama.
Galmee wardii hirmaannaa ol kaa'uu
Fayyadamaa A'n galmee hirmaannaa ol kaa'e. Haalonni armaan gadii hojiirra ooluu ni danda'u:
Fayyadamaa A'n galmicha waan baneef galmichi fayyadamaa kan birootiin foyyefamee ol hin kaa'amne.
Galmichi ol kaa'ameera.
Fayyadamaa A'n galmicha waan baneef galmichi fayyadamaa kan birootiin foyyefamee ol kaa'ameera.
Yoo jijjiiramoonni waldhabuu baatan, galmichi ol kaa'ama.
Yoo jijjiiramoonni waldhaban, qaaqichi waldhabinsoota furu ni agarsiifama. Fayyadamaa A'n waldhabootaaf fooyya'aa isa kam "Kan koo Kaa'i" yookiin " Kan biroo Kaa'i" kaa'uu akka qabu murteessuu qaba. Yommuu waldhabinsootni hundi furaman, galmichi ol kaa'ama. Yommuu fayyadamaa A'n waldhabinsoota furu, galmicha hirmaannaa fayyadamaa biroon ol kaa'uu hin danda'u.
Fayyadamaa kan biroon galmicha hirmaannaa ol kaa'uuf yaala yeroo kana keessa waldhabinsoota fura.
Fayyadamaa A'n dhaamsa kan keessa-makissi guddina keessa jira jedhu arga. Fayyadamaa A'n ammaaf ajajicha olkaa'uu dhiisuuf filachuu danda'a, yookiin yeroo muraasa booda olkaa'insa lamyaala.
Yommuu fayyadamaan wardii hirmaannaa fiixa bahinsaan olkaa'u, ajaja olkaa'uu booda galmichi lamfe'amee, wardiichi jijjiiramoota hundaa dhiyoo fooyya'an kanneen fayyadamtoota hundaan ol kaa'aman agarsiisa. Yommuu fayyadamaa biroon qabiyyeewwan muraasa jijjiiru dhaamsi "jijjiiramtoonni alagaa ida'amaniiru" sana agarsiisa.
Gamtoomina Barreessaa, Toleessaa, fi Fakkaasaa keessaa
Muraalee hundaaf Barreessaa, Toleessaa, Fakkaasaa fi Calc tiif yommuu hirmaannaan galmee hin dandeessifamne tahe, saamsuun faayilii ni danda'ama. Saamsuun faayilii kuni yommuu galmeema walfakkaatu opireetingi siistemii adda addaa irraa gaheenya taasisnu illee ni jira:
Fayyadamaa A'n galmee bane. Haalotni armaan gadii hojiirra ooluu ni danda'u:
Galmichi fayyadamaa biroo kaminiyyuu hin saamsamne.
Fayyadamaa A tiin galmeen kun gahinsa dubbisuu fi barreessuuf ni banama. Hamma fayyadamaa A'n galmicha cufutti galmichi fayyadamtoota biroof ni saamsama.
Galmichi sirna faayiliitiin akka "dubbisuu-qofa" tti milkataa'eera.
Galmichi kuni haalata dubbisuu-qofa tiin ni banama. Gulaaluun hin eeyyamamu. Fayyadamaa A'n maqaa galmee biroo yookiin xurree biroo fayyadamuudhaan galmicha ol kaa'uu ni danda'a. Fayyadamaa A'n garagalcha kana gulaaluu ni danda'a.
Galmichi fayyadamaa biroo tiin saamsameera.
Fayyadamaa A'n qaaqa galmichi saamsamuu isaa fayyadamichatti himu arga. Qaaqichi galmichi haalata dubbisuu-qofaan akka banamu, yookiin garagalcha gulaaluuf banuu, yookiin ajajicha banuu dhiisuuf kenna.
Title is: Gamtoomina